अनौठो गाउँ, जहाँका मानिसले सर्पको विष पचाउँछन्, सर्पसँगै खेल्छन् - Saptakoshionline
अनौठो गाउँ, जहाँका मानिसले सर्पको विष पचाउँछन्, सर्पसँगै खेल्छन्
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २५, २०७४ समय: ६:४७:१०
भारतको बिहार राज्यस्थित समस्तीपुर इलाकामा एउटा सिन्धियाघाट नामक गाउँछ रहेको छ । उक्त गाउँका मानिसहरु यतिधेरै बलवान छन् की उनीहरुलाई जस्तोसुकै विषालुु सर्पले डसेपनि फरक पर्दैन ।भारतको बिहार राज्यस्थित समस्तीपुर इलाकामा एउटा सिन्धियाघाट नामक गाउँछ रहेको छ । उक्त गाउँका मानिसहरु यतिधेरै बलवान छन् की उनीहरुलाई जस्तोसुकै विषालुु सर्पले डसेपनि फरक पर्दैन ।
सर्पले डसेर सर्पको विष शरीरमा फैलिएपनि यो गाउँमा मानिसहरु मर्दैनन् अर्थात् यो गाउँका मानिसहरुले सर्पको विष पचाइदिन्छन् ।
नागपञ्चमीको अवसरमा त्यहाँ सर्पको मेला नै लाग्दछ र उक्त मेलामा मानिसहरु सर्पसँग खेल्दछन् । यसरी खेल्दा धेरै जनालाई सर्पले डस्दछ पनि । तर उनीहरुलाई केही हुँदैन । देवी भगवतीको आशिर्वादले गाउँका मानिसहरुमा सर्पले डस्दा कुनै असर नपर्ने विश्वास गाउँलेहरुको छ ।
यो गाउँका मासिनहरु गोमन लगायतका खतरनाक सर्पहरुलाई समेत पक्रेर घरमा राख्दछन् । दुनियाकै विषालु सर्पमा पर्ने गोम साँपलाई घरमा राखेर उहीँसँग खेल्दछन् र जिस्काउँछन् । बच्चाबच्चीहरुले त साना तिना सर्प शिवजीले झैँ गलामै लगाउँछन् ।
नागपञ्चमीको दिन हजारौँ श्रद्धालुहरुले नागदेवको पुजा अर्चना गर्छन् गाउँमा । पुजाआजापछि मानिसहरु गाउँ नजिकैको नदीमा गएर सर्प समात्दछन् । गाउँका सबै मानिसहरु सर्प समाउनमा माहिर छन् । यसरी समातेका र घरमा पालेका सर्पहरुको मेला नै लगाइन्छ । यस्तो मेला ३ सय वर्षदेखि चलिरहेको छ ।
सर्पको पुजा गर्दा र सर्पलाई दूध र धाका लावा चढाउनाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गाउँलेहरुमा रहेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
जानी राखौँ ! अण्डा भित्र भएकाे रगतको थोप्ला खान मिल्छ कि मिल्दैन ?
बिहानको नास्ताका लागि यदि कुनै खानेकुरा खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला अण्डाकै नाम आउँछ । विश्वमा नै बिहानको नास्ताका लागि...
कुन दिशामा फर्केको घर शुभ हुन्छ ? यसो भन्छ वास्तुशास्त्र
वास्तुशास्त्र अनुसार विभिन्न दिशाहरुको विभिन्न स्वभावहरु हुन्छन् । दिशाहरुको स्वभाव अनुसारका संरचनाहरु त्यस दिशामा बनाउन...